Mogadishu Journal » Ku dhawaad 50 qof oo ku dhimatay Shil Gaari
Mjournal :-Inta la xaqiijiyay ku dhawaad 50 qof ayaa ku dhimatay kadib markii gaari wayn oo nooca shidaalka qaada ah uu ku dhacay gaari kale oo marayey waddo wayn oo marta galbeedka Jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo.
Sidda ay sheegeen Mas’uuliyiinta Shilka ayaa ka dhacay magaalada Kisantu, oo u dhaxaysa magaalo madaxda dalkaas ee Kinshasa iyo dekedda Matadi.
Magaalada Kisantu waxay 120km (75 miles) koonfur galbeed kaga began tahay magaalada Kinshasa.
Maamulka Magaalada ay ka dhacday dhacdadaan ayaa warbaahinta u sheegay in dad ku dhow Boqol qof ay waxyeelo soo gaartay.
” Holacii ayaa si dhakhso ah ugu faafay guuryihii goobta ka ag dhawa,” sida uu ku warramay raadiye ay Qaramada midoobay leedahay.
Qof goob jooge ah ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in uu arkay “Maydadka dad gaaraya 53 qof oo gubtay”
Dhakhtar ku sugan cisbitaal u dhow halka uu shilku ka dhacay oo daawaynaya dadka dhibbanayaasha ah ayaa sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii ay u daawayn lahaayeen dadkii shilkaas ka badbaaday.
” Waxaan iskudayaynaa inaan dadkaas caawinno, oo aan jirkooda biyo la gaarno, balse nasiib darro wali waxaa jira qaar dhimanaya” ayuu yiri Dr Tresor oo u warramay AFP
Mr Matabuana ayaa sheegay in masuuliyiinta deegaanku ay qaadeen tallaabooyinkii ay kula wareegi lahaayeen masuuliyadda dhammaan dadka dhibku soo gaaray.